Ny fiarovana ny tontolo iainana voajanahary dia mbola ny fifantohana amin'ny famolavolana lamba vita amin'ny akanjo vita amin'ny lamba amin'ny lohataona sy fahavaratra 2021
Amin'ny vanim-potoanan'ny hatsarana dia lohahevitra tanora sy isam-batan'olona ity. Fandavana ny fiarahana amin'ny hafa, fanentanana ny fanambarana mivantana, kely, tapaka ary tokana no toetra mampiavaka an'ity taranaka ity; Ny hatsarana dia ny fomba fanehoan'izy ireo tsotra, mahatsikaiky ary sariaka, ary fanehoana ny tenany ihany koa mavitrika. Mandritra izany fotoana izany, ny fampidinana ny filalaovana sy ny fahalianan'ny fihetsika dia nanjary fototarazon'ny endrika famolavolana sy marika ho an'ireo marika ara-barotra hisarika ny taranaka tanora.
Araka ny fandalinana sy ny vinavinan'ny fironana amin'ny varotra tamin'ny voalohan'ny Fetiben'ny lohataona 2021, ny fiarovana ny tontolo iainana voajanahary dia ifantohan'ny famolavolana lamba vita amin'ny akanjo vita amin'ny lamba tonta amin'ny lohataona sy fahavaratra 2021 ao amin'ny China Textile City. Ny vokatra lohataona sy fahavaratra T-shirt vita amin'ny lamba vita amin'ny 2021 dia manasongadina ny fampiononana voajanahary, ny fiasa ary ny ekolojia. Manomboka amin'ny endrika kofehy, firafitry ny lamba ka hatramin'ny famitana azy, dia hitarika ny fivoaran'ny lamba izy io, izay hanamboatra ny lohataona sy fahavaratra T-shirt vita amin'ny baoritra vita amin'ny China Textile City amin'ny 2021 Ny loko malaza dia nanjary maro karazana kokoa. Ny famoahana ireo sary maitso miorina amin'ny tampon-tendrombohitra mankany amin'ny zigzag sy ny endrika mosaic amin'ny akanjo baoty, dia nanintona ny masony tany ivelan'ny faravodilanitra lavitra ny mpamorona ary nankany amin'ny lanitra midadasika izay rakotry ny tany efitra. Namorona endrika pirinty momba ny volana sy ny kintana, ary namintina indray ny filentehan'ny masoandro, nanjary kofehy matevina. Ny lohahevitra hafa dia misy ny tarehimarika mijery ny filentehan'ny masoandro sy ny lanitra feno kintana, misolo tena ny mpamorona azy manokana, mba hanamafisana sy handravahana dantelina. Eo ambanin'ny endrika adalan'ireto lamba modely ireto dia manafina ny hevitry ny mpamorona tsy manam-paharoa. Raha mandinika tsara ianao dia ho hitanao fa be ny zavatra tony sy ambany ary tsy azo araraotina miafina ao amin'ilay andiany iray manontolo. Ohatra, ny akanjo ba baitra avo lenta dia toa lamaody be. Kofehy mifangaro marobe toy ny kofehy landy vita amin'ny landy, kofehy rongony vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy, kofehy volondavenona voninkazo, lamba vita amin'ny landihazo voasarimakirana, jacquard miloko ary lamba intarsia, kofehy mihantona, lamba vita pirinty telo refy Miandry sitraka
Ny fisafidianana lamba T-shirt 2021 China Textile City lohataona / fahavaratra dia misy ireto sokajy manaraka ireto: ny landihazo miharo volo dia mbola fampiasa indrindra amin'ny T-shirt marika sy fialamboly avo lenta noho izy mahazo aina, mifoka rivotra, malefaka, mahazaka ketrona ary. mamirapiratra tsara; vokatra vita amin'ny landihazo voadio dia vokatry ny malefaka sy mahazo aina, ny fomba lamba dia mety kokoa amin'ny besinimaro, mety kokoa amin'ny marika tanora mahazatra; ny lamba landihazo semi-jersey dia miverina amin'ny loko tany am-boalohany tamin'ny lamba rongony vita amin'ny landihazo, mamorona tady roa sosona, miampy fanenomana volotsangana vita amin'ny taolana ary taolan-tehezana kely misy pentina. Ny fananganana kofehy landy sy rongony maivana ary lamba vita amin'ny baoritra maivana tsy ampoizina. Ny vokatra polyester vita amin'ny landihazo dia nanjary safidy voalohany amin'ny marika fanatanjahan-tena sy fialam-boly noho ny toetrany miasa toy ny fifoka ny hamandoana sy ny hatsembohana, ny taratra manohitra ny ultraviolet, ary ny toetran'ny bakteria. Ireo fitaovana fanodinana kitay dia mikatsaka fiarovana ny tontolo iainana ataon'ireo mpanjifa. Ao amin'ny tontolon'ny karbaona ambany dia lasa malalan'ny marika fitafiana izy io, ary marika fanatanjahan-tena maro any an-trano sy any ivelany no nanomboka nampiditra fitaovana toy izany tamin'ny ambaratonga lehibe. Mandritra izany fotoana izany dia azo jerena amin'ny fanadihadiana fa mizara tsikelikely ny fizarana lamba fibre misy singa marobe ao amin'ny tsenan'ny T-shirt noho ny fifamenoan'ny zava-bitany. Ohatra, ny lamba landihazo vita amin'ny landy dia tsy ny fahatsapana landihazo ihany, fa koa ny fisehoana silky. Ny lamba manana fanoherana ketrona tena tsara ary mora karakaraina, ary manana fifaninanana matanjaka amin'ny tsena. Ny fampiasana miverimberina amin'ny modularite maritrano sy ny lamina indostrialy dia vita amin'ny lamba volon'ondry tokana tsara sy lamba tonta roa tonta, miampy endrika miloko tsy miandany. Miaraka amina rafitra toy ny sac, ny lamba voatenona miaraka amina mpanenona tenona miampy pads vita amin'ny kofehy sy ny endrika voaravaka dia miseho eo an-toerana.
T / C polyester-landihazo mifangaro kofehy 32S karazan-doko nolokoina, T / C polyester-landihazo mifangaro kofehy 32S lamba miloko volom-borona any Shina tanàna lamba 2021 lohataona sy fahavaratra voaravaka lamba T-shirt, ary ny zoro efatra amin'ny landy vita amin'ny landihazo nitaingina kofehy fandokoana 32S Pique, knitted hexagonal pique, jirony vita amin'ny kofehy, kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy ary namboarina 40S landy mangatsiaka Ao Dai, sary mihetsika vita amin'ny Lycra vita amin'ny sary vita amin'ny Lycra, akanjo lava rayon, jirony 40S vita amin'ny landihazo, felam-bolo vita amin'ny volon'ondry, volon'ondry lava vita amin'ny volon'ondry, volory vita amin'ny volon'ondry marefo, T / C polyester landihazo landihazo, T / C polyester landihazo slub, Jersey CVC, CVC slub Jersey, kristaly vita amin'ny volory vita amin'ny lamba firakotra, landy ronono malefaka, landy milina volon'ondry volon'ondry, landy vita amin'ny landy vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba rayon Jersey sy 21S, 30S, 32S, 40S, 45S fonosana vita amin'ny rongony vita amin'ny landihazo, landihazo vita amin'ny Audrey, lamba vita amin'ny rayon nolokoana, lamba vita pirinty vita amin'ny rayon vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba, landy vita amin'ny landy vita amin'ny ronono, vita amin'ny landy vita amin'ny landy vita amin'ny lamba vita amin'ny landy vita amin'ny landy, vita amin'ny landy vita amin'ny rongony, kofehy vita amin'ny rivotra rayon, baoty T / R polyester viscose jiro, lamba tsotra vita amin'ny landihazo Tencel, 40S kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny lamba rongony, lamba rongony roa sosona, T / T kofehy polyester madio 32S kofehy vita amin'ny kofehin-kofehy, toy ny landihazo, volom-borona vita amin'ny landihazo, volomboasary mena, volondavenona, maitso Emeraoda, maitso mainty, manga manga, lanitra manga, mavo antonony, beige, mavo voasarimakirana vaovao, maitso voasarimakirana, mavokely, maitso atody, kafe maivana ary loko hafa dia hampitombo ny baiko. Aorian'ireo mpandraharaha matihanina marobe amin'ny fampidirana ny pirinty iraisam-pirenena amin'ny toeran'ny fanaovana pirinty sy ny fanaovana amboradara, dia ho be mpitia izany. Ny kofehin'ny rafitra manokana dia mamirapiratra ihany koa, toy ny kofehy avo lenta, kofehy miolakolaka matanjaka, kofehy miolikolika malemy, kofehy AB, kofehy vita amin'ny loko, kofehy volondavenona voninkazo, kofehy perla, kofehina volotsangana, kofehin-proteinina ary soja, fibra amoniaka cupro, sns rehetra. dia raisin'ireo tsena. Amin'ny fampiasana kofehy landihazo lava kalitao avo lenta, ny lamba dia tenona amina firafitra tery sy famirapiratana tsara. Mandritra izany fotoana izany, ny lamba vita pirinty dia ho tian'ny marika iraisam-pirenena maro, indrindra ny kofehy avo lenta sy ny lamba jacquard avo lenta voatenona miaraka amina milina fanjairana boribory avo lenta. Rookie eo amin'ireo lamba avo lenta izy io. Ny kofehin-doko vita amin'ny loko, indrindra ny kofehy vita amin'ny loko ambony, toy ny kofehy 120S / 2 sy 80S / 2, dia manana loko isan-karazany, ary ny fiatraikany manokana dia nahatonga ny endrika mpamorona endrika maro. China Textile City 2021 Lohataona / Fahavaratra namboarina T-shirt lamba 32S kofehy polyester madio miloko miloko vita amin'ny T-shirt efa-joro mihinjitra sy 118D matte FDY, 100DDTY fanontana nomerika namboarina T-shirt efatra lalana, fanontana nomerika ary paikady aorian'ny nomerika T-shirt Knitted T knitted miaraka amina làlana efatra, vovoka volamena sy volafotsy ary varahina ary famafazana no nivelatra tamin'ny lafiny rehetra, ary ny lamina nohavaozina dia manararaotra ny tsena. Manokana, ny T-shirt miolangolangam-baravarankely vita amin'ny haingon-tady miisa 118DFDY sy ny T-shirt mivelatra vita amin'ny lafiny efatra dia ny haben'ny ampahany amin'ny varotra.